« Héroïne » 1 kilao nafenina tao anaty baoritra feno paty
MH 16:04:00 social
Lehilahy telo nitondra rongony mahery vaika, héroïne, no tratran’ny zandary teny Mahitsy ny volana lasa teo. Tanzaniana no tompon’ny entana ary malagasy no saika handray azy, ny mpamilin’ny taksiborosy kosa no olona fahatelo voarohirohy. Nafenina tao anaty baoritra misy fonosana paty « presto » ilay sachet misy ny rongony milanja 1kilao kanefa hitan’ny zandary nandritra ny fisavana araka ny fanoroan’ny loharanom-baovao iray.
Saika halefa any Antsiranana ny entana araka ny fanazavana azo ka nahatonga ny zandary nidina tany an-toerana nisambotra ilay lehilahy saika hividy azy. Ilay teratany tanzaniana kosa teo am-pandraisana fiaramanidina hihazo an’Antsiranana no tratra ny ampitson’ny nahasamborana ilay mpamilin’ny taksiborosy. Natolotra ny Fampanoavana omaly izy telolahy saingy nahemotra indray izany noho ny tsy fahampian’ny taratasy niampangàna azy ireo.
Zava-mahadomelina mahery vaika ny héroïne ary ny saina avy hatrany no simbainy voalohany rehefa mifoka na mitsindrona azy ny olona iray. Mahazo fahafinaretana sy filaminana ny saina sy ny fo rehefa mandray azy fa mandalo izany, ny vatana kosa dia malemilemy ary misy aza ny olona tsy tompon’ny tenany rehefa mihinana azy. Miteraka fiankinandoha tanteraka ary matetika tsy mahavita miasa intsony ny olona rehefa zatra azy fa lasa mangataka sy mitady vola mba hitsindromana azy. Voararan’ny lalàna araka izany ny fivarotana sy fandraisana ity zava-mahadomelina ity.